Fiangonana Archives - Page 3 sur 4 - Fiangonana FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Fanasana KTLM FEO IRAY LIMOGES – Sabotsy 08 desambra 2018
Am-pifaliana no andraisantsika ity fanasana ity ary aely mivelatra ho an’ny kristiana rehetra eto amintsika. Andao! — Noho ny fitsingeren-taonan’ny KTLM FEO IRAY LIMOGES, dia faly izahay manasa anareo FLM ORLEANS hanatrika ny hetsika karakarainay: « Concert accompagné d’un apéritif dînatoire », izany dia ho tanterahina ny Sabotsy 08 desambra 2018 amin’ny 06 ora sy sasany hariva …
Alarobian’ny Lavenona 14 febroary 2018
ALAROBIAN’NY LAVENONA Ao anaty diary FLM 2018 sy Alimanaka dia ahitantsika fa Alarobian’ny Lavenona ity andro anio ity. Misy Teny voaomana ho antsika kristiana rehetra mifanandrify amin’izany vanim-potoana izany, izay manamarika ny 40 andro mialoha ny Paska izay fotoanan’ny Karemy na ny Pasiona mitohy hatramin’ny herinandro Masina. Indro ary atolotra antsika ireo teny ireo, ary …
Faran’ny taona 2017 FLM Orléans – Ao Fleury-les-Aubrais
Misaotra an’i Jesosy isika fa Nomeny Krismasy 2017 nahafahantsika niombona sy nandray Azy tamim-pifaliana. Efa ankatoky ny famaranana ny taona 2017 koa isika ankehitriny ary manoloana izany indrindra dia manao lamina ny Fiangonana. Alahady rahateo moa ny 31 desambra amin’ity taona ity. Koa manasa ny mpianakavin’ny finoana rehetra ary ny FLM Orléans hiarahi-ombom-bavaka ny Alahady …